Bandhigyo Muusig oo La Daah-Furay - Ellicott Dredges
Fiidiyeyaasha Filimka Dredge
Xayawaanka googa goosan
Ellicott® dhir udgoon waxaa lagu heli karaa cabirro badan iyo qoto dheer oo qodis ah. Qaab-dhismeedkooda culus ayaa xaqiijinaya badeecada cimri dheeri iyo soo laabasho sare oo maalgashi ah.
Xaraashka Xayawaanka Dhoofaya
Ellicott-kii Swinging Dragon® qulqulayayaashu waxay ku habboon yihiin Marinas, marinno biyo-dhuuban, iyo mashaariic dib-u-soo-nooleyn oo dhul-daaq ah. Jaranjarooyinkayaga wareegaya ayaa sahlan in lagu shaqeeyo, hufan, iyo hal gaari oo qaadi kara.
Wax ka qabashada Qalabka Dredge
Waxaa jira xulashooyin fara badan oo maareynta maaddada loo heli karo si loogu tuuro walxaha qallalan. Fursadaha noocan oo kale ah waxaa ka mid ah Nidaamyada Mashiinka Farsamaynta ee loogu talagalay jiifka, Goobaha Meelaynta Maaddada Dredge oo ay ku jiraan maaddooyin la soo tuuray, Nidaamyada Dheecaanka Furan ee qalabka si toos ah looga soo tuuro xeebta, iyo Tubbada Dewatering si loo adkeeyo adkaanta
Qulqulka Goobaha iyo Xargaha leh Ellicott Dragon® Dredge
Ellicott Dragon® Dredges waxtar ayey ku leeyihiin nadiifinta gashiga iyo dekedda. Isku soo wada duuboo ciidda ayaa gebi ahaanba xannibi karta wadiiqooyinka laga raaco taraafikada doomaha. Ellicott Dragon® Dredge ayaa loo isticmaali karaa in lagu nadiifiyo kanaalka. Ka dib markii kanaalka la qallajiyo, doomaha si nabad ah ayey u mari karaan.
Faa'iidooyinka Qulqulka Biyo-siinta Codsiyada Macdanta
Qoditaanka Haydarooliga waxay faa iidooyin badan ku leedahay qodista farsamada. Tusaale ahaan, qoditaanka haydarooliga waxay soo bandhigeysaa fursadda shaqo yaraanta, tamarta iyo qiiqa oo yaraada, kharashyada raasumaalka oo yar, iyo kharashyada dayactirka oo hooseeya Sidoo kale, qulqulka hawo-furka waxay u oggolaaneysaa wareejinta tooska ah ee warshadda wax soo saarta, taas oo yaraynaysa dib-u-habeynta maaddada.
Animation Baabuur Spud
Isku-darka nidaamka gawaarida gawaarida ayaa kordhiya wadarta guud ee wadista qulqulka waxayna hagaajineysaa wax soo saarka guud ee waddo iyada oo u oggolaaneysa wadaha inuu sameeyo dhowr horumarin ka hor inta uusan dib u dhigin shaqada. Gawaaridayada loo yaqaan 'spud gaari' ayaa lagu dari karaa mid ka mid ah qashinkeena.